Nay Pyi Taw International Science Academy will be launching one of its after-school activities, the Taekwondo – Nay Pyi Taw International Science academy
Nay Pyi Taw International Science Academy will be launching one of its after-school activities, the Taekwondo
January 14, 2022School Activity, School Newsby NISA Admin
Nay Pyi Taw International Science Academy will be launching one of its after-school activities, the Taekwondo, this coming Monday and Thursday, January 17 and 20 respectively at 3:30 – 5:00 pm.
It will be headed by the instructor Mr. Nay Myo Linn. This activity is open to all levels from Year2to Year 10. You may call the office at the numbers 09428460373 / 09764987395 for registration. The uniform will cost Ks 25,000 foraset.
This activity will bring camaraderie. It will build strength, stamina, and flexibility, as well as overall fitness and well-being. This may also lead to self-discipline, competitive awareness, and social skills.
What are you waiting for? Grab your phone and reserve your slot now!
Nay Pyi Taw International Science Academy အ​​နေဖြင့် လာမည့် ဇန်နဝါရီ လ ၁၇ ရက်​နေ့၊ တနလ်ာ​နေ့မှ စတင်၍ အပတ်စဥ်
တနလ်ာ​နေ့ နှင့် ​ကြာသာပ​တေး​နေ့များတွင် (ည​နေ ၃နာရီ ခွဲ မှ ၅နာရီ) အထိ တိုက်ကွမ်ဒို အားကစားသင်တန်း တစ်ခု စတင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြား​ပေးသွားမည် ဖြစ်​​ကြောင်း အသိ​ပေး ​ပြောကြားလိုပါသည်။
အဆိုပါ သင်တန်းအား နည်းပြ ဆရာ​နေမျိုးလင်း မှ သင်ကြား​ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းတွင် Year2မှ Year 10 အထိ NISA​ကျောင်းသား/ သူများ အားလုံးတက်​ရောက် သင်ကြားနိုင်ပါသည်။
စာရင်း​ပေးသွင်းလိုပါက NISA ​ကျောင်းဖုန်းနံပါတ်များ ဖြစ်သည့် 09 – 428460373/ 09 – 764987395 ဆက်သွယ်​ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ တိုက်ကွမ်ဒို ဝတ်စုံ တစ်စုံသည် ၂၅၀၀၀ ကျပ် ကျသင့်မည် ဖြစ်​​ကြောင်း ​လေးစားစွာဖြင့် အသိ​ပေး ​ပြောကြားလိုပါသည်။
တိုက်ကွမ်ဒို အားကစား ကစားခြင်းဖြင့် တစ်ဦး နှင့် တစ်ဦး ခင်မင်ရင်းနှီးမှု ပိုမို ရရှိ​စေပြီး ကျန်းမာ ကြံခိုင်မှု ကို တည်​ဆောက်​ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် မိမိကိုယ်ကို မိမိ စည်းကမ်းရှိမှု၊ ယှဥ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း ရှိမှု နှင့် ​ကောင်းမွန်​သော လူမှုဆက်ဆံ​ရေးတို့ကို လည်း ဖြစ်​ပေါ်​စေပါသည်။
​စောင့်ဆိုင်းမ​နေဘဲ ဖုန်းတချက်ဆက်ရုံဖြင့် စာရင်း ​ပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ…………..